Koorsooyinka - Sprachschule Dialog
Koorsada akhris -qoraalka
Koorso qaas ah
Wadajir wanaagsan. Ku Baro Jarmal Dialog Sprachschule ee Karlsruhe.
Dadku way kala duwan yihiin, sida dhaqammada iyo dunidaba. Taasi waa sababta ay aad ugu muhimsan tahay sameynta iyo kor u qaadida halbeegga guud ee afka Jarmalka ee bulshada dhexdeeda. Sidaas ayaa wada -hadalku ku soo if -baxaa, waa sida wada -jirku u soo baxo. Iyo koorsooyinkeena isdhexgalka waxaan ku biirineynaa habkan waxaanan barnaa ardaydeena furaha luqadeed ee bulshada. Sida loo barto Jarmalka Karlsruhe - oo leh koorso Jarmal ah dugsiga luqadda Wada -hadalka.
> Halkaan waxaad ka heli kartaa buug -yaraha rasmiga ah ee BAMF in ka badan 32 luqadood.
Guriga cusub ee Jarmalka. Dhaqamo badan at Dialog Sprachschule.
Sida ay u kala duwan yihiin asalka iyo xididdada muhaajiriinta ku nool Jarmalka waa; dhammaantood waxay wadaagaan hal shay: gurigooda cusub - Jarmalka. Koorsooyinkeena hanuuninta, ardaydeenu haddaba waxay ka bartaan waxyaabo muhiim ah Taariikhda Jarmalka, siyaasadda iyo dhaqanka iyo nolosha bulshada Jarmalka. Markaa waxay isticmaali karaan deegaankooda cusub si fiican u fahmaan oo si firfircoon uga qaybqaado nolosha bulshada.
> Halkan waxaad ka heli doontaa dhammaan su'aalaha rasmiga ah ee BAMF ee imtixaanka "Ku noolaanshaha Jarmalka".
Baro afka Jarmalka muddo dheer koorsada waalidka. Aad bay ugu sahlan tahay Wadahadalka Sprachschule.
Maadaama nolol maalmeedka waalidku uu noqon karo mid walaac leh, koorsooyinka barbaarinta ayaa si gaar ah loogu habeeyey baahida waalidka marka la eego xawaaraha waxbaridda iyo nuxurka. Waalid ahaan, waxaad dhigan kartaa 1000 halkii aad ka qaadan lahayd 700 cashar oo qayb ka ah barnaamijka koorsada isdhexgalka BAMF.
Waxaa lagu dammaanad qaaday amniga. Xarunta imtixaanka wada hadalka.
Dialog Sprachschule waa xarun imtixaan oo shahaado u ah imtixaanada telc. Annaga waxaad nala qaadan kartaa imtixaanka DTZ (imtixaanka Jarmalka ee muhaajiriinta) iyo imtixaannada kale ee rasmiga ah ee heerarka A1, A2 iyo B1, B2. Imtixaannada Jarmalku waxay si joogto ah u dhacaan Sabtida. Waxaad ka heli kartaa dulmar bogga balamaha.
ABC kor iyo hoos. Baro akhriska iyo qorista Dialog Sprachschule.
Xitaa maalmahan, wax -qoris la'aanta waa arrin - ha ahaato mid ka timid waxbarasho -dugsiyeed la'aan ama dastuur shaqsiyeedka sida disleksiya. Waxaan siinnaa koorsooyin akhris / qoris qof kasta oo aan weli wax qorin waxna qorin.
Shaqada, tababarka iyo waxbarashada. Jarmal badan oo ah Dialog Sprachschule.
Miyaad rabtaa inaad dhammaysato tababar xirfadeed ama shahaado ama aad Jarmalka ku aqoonsato diblooma? Ama ma jeclaan lahayd inaad isku diyaariso imtixaanka DSH ama TestDaF ama wax la mid ah? Haddii aad jeclaan lahayd inaad xoojiso xirfadahaaga Jarmalka, waxaad nagala soo qayb geli kartaa koorsooyinka Jarmalka ee heerka sare ah B1 + / B2.
9:00 a.m. - 1:00 p.m. iyo
2:00 a.m. - 4:30 p.m.